नेपाल विश्वकै सुन्दर देश : सन्नी लियोनी
नायिका सन्नी लियोनीलाई नेपाललाई विश्वकै सुन्दर देश भनेकी छिन् । चलचित्र ‘पासवर्ड’को प्रिमियरमा सहभागी हुन नेपाल आएकी सन्नीले नेपाल आउन पाउँदा आफू सधै नै उत्साहित हुने बताइन् । काठमाण्डौको कुमारी हलमा आयोजना भएको चलचित्रको प्रिमियरमा सहभागी हुन पुगेकी सन्नीले नेपाली चलचित्रमा आइटम नृत्य गर्न पाउँदा पनि खुशी व्यक्त गरिन् । सन्नीले भनिन्–‘विश्वकै सबैभन्दा सुन्दर देशमा उपस्थित हुन पाउँदा आनन्दित महशुश भएको छ । यस्तै, मलाई यो निकै नै उत्साहजनक समयमा… पुरा पढौ
पशुपतीको दसैं गीत बजारमा (भिडियो सहित)
पशुपती शर्मा र टिका पुनको स्वर रहेको दशैंगीत मामाघर जाम सार्वजनिक भएको छ। पशुपती शर्माको लय र शब्द रहेको उक्त गीतको भिडियोमा पशुपती शर्माका साथमा चर्चित मोडेल करिश्मा ढकालको अभिनय देख्न सकिन्छ । साथै मौसमी हिमालिको निर्देशन मा तयार भएको यस गीतमा दिनेश बान्तवा राइको छायांकन रहेको छ भने बिगतका शर्माका गीतहरु जस्तै यो पनि सामाजिक सन्देश बोकेको निकै रमाइलो बनेको छ। पुरा पढौ
सलमान खानलाई बलिउडमा प्रतिबन्ध !
बलिउड स्टार गायक मिका सिंहलाई भारतमा प्रतिबन्ध लागेको छ। उनले पाकसितानमा पुर्व राष्ट्रपति पर्वेज मुशरफको पारिवारिक विवाह भोजमा सरिक भएको र गीत गाएको कारण अखिल भारतीय चलचित्र मजदुर संघले प्रतिबन्ध लगाएको हो । सलमान खान अमेरिकाका शहरहरुमा आफ्नो 'शो' लिएर जाँदैछन। जस्मा मिका सिंह पनि सहभागी हुनेछन्। उक्त कुराको हल्ला चलेपछि संघले यदी सत्य हो भने सलमान खानलाई पनि प्रतिबन्ध लाग्ने बताएको छ। आयोजकले कुनै पनि शोहरुमा सलमान र मिकाको… पुरा पढौ
हालै रिलिज भएको ‘साहो’ का निर्देशक सुजितले इन्स्टाग्राममा एउटा भावुक पोष्ट सेयर गरेर दर्शकलाई दोस्रोपटक फिल्म हेर्न अपिल गरेका छन् । उनले पोष्टमा आफ्नो फिल्म निर्माण यात्रा सेयर गर्दै दर्शकले किन दोस्रोपटक फिल्म हेर्नुपर्छ भनेर पनि जानकारी दिएका छन् । सुजितले लेखेका छन्, ‘जब म १७ वर्षको थिएँ तब पहिलो शर्ट फिल्म बनाएको थिएँ । न पैसा थियो, न टिम तर अरकुट र परिवारको अत्यधिक समर्थन थियो । उक्त शर्ट… पुरा पढौ
प्रियंका चोपडालाई किन गरियो ट्रोल
नायिका प्रियंका चोपडाले इन्स्टाग्राममा श्रीमान् निक जोनसको उमेर गलत लेखेपछि ट्रोलको शिकार भएकी छिन् । वास्तवमा, नायिकाले निकसँगको एउटा फोटो सेयर गर्दै उनलाई टकिला ब्रान्ड भिल्ला भ्यानको लञ्चमा बधाई दिइन् । उनले लेखेकी छिन्, ‘तपाईंमाथि गर्व छ । २७ वर्षको उमेरमा तपाईं आफ्नै टिकलाको मालिक हुनुहुन्छ ।’ पोस्ट हेरेपछि थुप्रै इन्स्टा प्रयोगकर्ताले उनलाई निकको उमेर २७ नभई २६ भएको याद दिलाए । मानिसहरुले गरे यस्तो कमेन्टः एक प्रयोगकर्ताले लेखे, ‘उनी… पुरा पढौ
अमिताम बच्चन बने यस्तो चकित
हिन्दी फिल्मका महानायक भनेर चिनिने अभिनेता अमिताभ बच्चन भारतमा मात्र होइन भारतबाहिर पनि लोकप्रिय छन् । उनको लोकप्रियता भारतको उत्तरपूर्वी राज्य सिक्किमको एउटा झरनाको नाम नै बच्चनको नाम दिइएबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । स्वयम अमिताभ बच्चनलाई पनि यसबारे जानकारी थिएन । उनले ट्वीटरमा सो झरनाको फोटो रिट्वीट गर्दै झरनाको नाम अमिताभ बच्चन नै हो भन्ने कुरामा विश्वास गर्न नसकेको टिप्पणी लेखेका थिए । बच्चनले रिट्वीट तस्विरमा तीन मानिस देखिन्छन्… पुरा पढौ
पोखरामा शनिबारसम्म ४ सय ६० जनाभन्दा बढीमा डेंगु रोगको संक्रमण भेटिएको छ । डेंगुबारे टोल टोलमा सचेतना अभियान चलाएको पोखरा वडा नं. १७ ले हरितालिका तीजलाई लक्षित गरी शनिबार डेंगुरोगसम्बन्धी तीजगीत प्रतियोगिता आयोजना ग¥यो । प्रतियोगितामा नारी उत्थान दिदीबहिनी समूह, संकल्प आमा समूह र समृद्धि महिला समूह क्रमश प्रथम, द्वितीय र तृतीय भए । उनीहरुले क्रमश ७ हजार, ५ हजार ३ हजार १ हजारसहित प्रमाणपत्र पाएका छन् । सञ्चय कोष… पुरा पढौ
जेनिशा पुन बनिन् ‘पोखरा स्टार’
खुला नृत्य प्रतियोगिता ‘पोखरा स्टार सिजन–२’ को उपाधि जेनिशा पुनले जितेकी छन् । शनिबार पोखरामा भएको ग्राण्ड फिनालेमा पुनले फाइनल प्रवेश गरेका १४ जनालाई पछाडि पार्दै उपाधि जितेकी हुन् । उनले २५ हजार नगद पुरस्कार र मेडल हात पारिन् । प्रतियोगितामा पुनसहित ६१ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । प्रतियोगितामा मोनिका काउचा घर्ती मगरले द्धितीय, सागची गुरुङले तृतीय, अमृता राना मगरले सान्त्वना स्थान हासिल गरे । उनीहरूले क्रमशः १५ हजार, १०… पुरा पढौ
कन्या क्याम्पसमा तीजगीत प्रतियोगिता
कन्या क्याम्पस पोखराले शुक्रबार तीजगीत प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ । मानबिकी संकायतर्फबाट बिना बरालको समूह प्रथम, ब्यबस्थापन सङकायको तर्फबाट दुर्गा परियारको समूह द्धितीय, बि बि एस तेस्रो बर्षका दुर्गा सुबेदीको समूह तृतीय र 10+2 ब्यबस्थापन नेपाली समूह पुजा लामिछानेको समूह सान्त्वना भएका छन् । कार्यक्रममा क्याम्पस सञ्चालक समिति अध्यक्ष शिव मल्लले संस्कृति जगेर्ना गर्न युवा र विद्यार्थीको महात्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । निर्णायक मण्डलमा साहित्यकार एवं गायिका अम्बिका भण्डारी र… पुरा पढौ
‘गुञ्जन’ पोखराबाट सुरु
द्वन्द्व निर्देशक अष्ट महर्जनको निर्देशन रहने फिल्मको छायाँकन पोखराबाट सुरु भएको छ । मंगलबार पोखराको बिन्ध्वासिनी मन्दिरमा शुभमुहूर्त गर्दै फिल्मको छायाँकन सुरु गरिएको निर्देशक महर्जनले बताए । अष्ट यसै फिलमबाट निर्देशनमा होमिएका हुन् । एक्शन लभस्टोरी जनराको ‘गुञ्जन’मा सारा श्रीपाली, सरोज खनाल, हिउँवाला गौतम, कविर खड्का, रोहन शाहीको अलवा नव अभिनेता प्रितमराज सेन्चुरी को मुख्य भूमिका रहनेछ । ए.एच इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा हिराकृष्ण शाहीको प्रस्तुति र सुनीता शाही निर्माता रहेको फिल्मको… पुरा पढौ